UHLELO OLUZODALA INQWABA YAMATHUBA OMSEBENZI KUBANTU – Sivubela intuthuko Newspaper
UHLELO OLUZODALA INQWABA YAMATHUBA OMSEBENZI KUBANTU
UNGQONGQOSHE wezokuXhumana kuleli, uNkk Stella Ndabeni-Abrahams.
LUZODALA amathuba omsebenzi angu-2million uhlelo olumqoka lokufakwa kwama-WI-FI ezikoleni. Lezi zindaba zivezwe nguNgqongqoshe wezokuXhumana eNingizimu Afrika, uNkk Stella Ndabeni-Abrahams ekanye noNgqonqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nezeMvelo, kuleli uNkk Nomusa Dube-Ncube ngesikhathi benikezela ngeWi-Fi yabhusende esikoleni sokuqala esinyelwe yinyoni esandleni, iVezokuhle Primary yaseMgungundlovu.
Injabulo beyibhalwe ebusweni kumalunga omphakathi kanye nabazali babantwana bethakasela lolu hlelo oluzosiza abantwana. Lolu hlelo beluthulwa nguHulumeni kanye nokubambisana nabeJ.L. Dube Broadband.
UNgqongqoshe uNdabeni uthe kuyajabulisa ukuthi kuzohlumuala abaningi ngamathuba omsebenzi azovela egameni lokusizwa kwezikole nge-Internet. “Abazohlumula ngomsebenzi yilabo esizobasebenzisela ukufaka ama-WI-FA ezindaweni,” kuchaza u-Abrahams.
Uthe kungumsebenzi wabo njengoHulumeni ukuhlinzeka izikole ngezidingongqangi ezimqoka. Wethembise ukuthi lolu hlelo luzobonakala lukapakela kuzona zonke ezinye iziFundazwe ezikhona eNingizimu Afrika.
“Lolu hlelo kumqoka ukuba lufinyelele nakwezinye izikole,” usho kanje uNdabeni. UNgqongqoshe uDube-Ncube uthe uyakuqonda ukuthi inhlangano iBroadband ihamba ezinyathelweni zomholi osalala kobandayo, uMnu J.L. Dube owabe eyazisa futhi eyibeka eqhulwini intuthuko yabantu.